Manchester United Iyo Liverpool Oo Quus Kasii Noqonaya Kalidou Koulibaly & Koox Cusub Oo Kaga Gacan Sarraysa - Gool24.Net
Manchester United Iyo Liverpool Oo Quus Kasii Noqonaya Kalidou Koulibaly & Koox Cusub Oo Kaga Gacan Sarraysa
Jurgen Klopp iyo Ole Gunnar Solskjaer ayuu mid walba gaarkiisa ugu hamiyay in difaaca reer Senegal ee Kalidou Koulibaly ay ka garab ciyaarsiiyaan Virgil van Dijk iyo Harry Maguire, waxaana dagaalka oo markii hore labadooda uun ku ekaa kusoo biirtay cudud cusub oo hadda u dhow inay ku garaacdo labadoodaba.
Sida uu sheegay wariyaha caanka ah ee Paolo Esposito, Manchester United iyo Liverpool waxa dalabkoodii ka miisaan cuslaaday mid kale oo ay ka gudbisay kooxda maalqabeenka noqonaysa dhowaanta ee Newcastle United oo Sucuudigu uu iibsanayo, waxaanay Napoli u janjeedhsatay dalabka miisaanka leh.
Esposito waxa kale oo uu sheegay in Newcastle United ay dalab weyn hor dhigtay Napoli oo ay ka doonayso 28 jirkan difaaca adag ah, kaas oo xili ciyaareedka dambe qayb ka noqon doona mashruuca dhismaha kooxdaas ee maalgelinta Sucuudiga helaysa.
Kalidou Koulibaly oo muddo dheer diiradda Manchester United iyo Liverpool ay saarnayd, ayaa waxa Napoli ay kooxaha doonaya ku xidhan inay bixiyaan £62 milyan oo Gini oo ay hadda diyaar la tahay Magpies.
Wariyuhu waxa kale oo uu sheegay in Juventus oo tartanka ku jirtay ay iyaduna lacag la’aan tahay oo aanay awoodi karaynin inay bixiso lacagta badan ee Napoli rabto, waxaanu yidhi: “Juventus ma haysato awood dhaqaale oo ay ku iibsato difaaca Napoli ee Kalidou Koulibaly, waxaanan rumaysanahay inuu tegi doono Premier League, waxaana ugu horreysa Newcastle.”
Exposito oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay sida United iyo Liverpool loogu garaacayo heshiiska, waxaanu yidhi: “Kaddib Manchester United iyo Liverpool ayaa kursiga ugu fadhiyey laakiin dalabkoodu wuxuu ka yar yahay midka Newcastle.”
Wariyuhu waxa kale oo uu Liverpool u sheegay sida uu difaaceedu noqon doono haddii ay lasoo saxeexdaan Koulibaly, waxaanu yidhi: “Dabcan, haddii Koulibaly uu tago Liveprool waxa uu la abuuri doonaa lammaane Virgil van Dijk, waxaanay noqon doonaan labada difaac ee ugu wanaagsan dunida.”